Rehefa Mandihy ny Masinina | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Alexis Entprima dia ampahany amin'ny tantara kanto. Ny masinina kafe misy faharanitan-tsaina artifisialy namboarina dia mamokatra mozika sy horonantsary miorina amin'ny tantara na ny sceneries miaraka amin'ny tanjona hamoronana hira azo dihy Amin'ity hira ity dia ilay seho ao amin'ny efitrano milina misy robot.
Ny famokarana mozika dia noforonina tamin'ny fomba isan-karazany. Ireo hira misy fitsikerana ara-tsosialy an'ny Cosmonauts matetika dia manomboka amin'ny fisafidianana lohahevitra iray, avy eo manaraka ny tonony, avy eo ny mozika mankamin'ny tonony. Alexis dia faritana fa faharanitan-tsaina artifisialy izay manao mozika dihy, saingy izany no tantara ao ambadik'i Alexis. Mazava ho azy fa noforonin'olombelona ihany koa ity mozika ity, na dia singa maro aza no novokarin'ny milina mialoha.
"When Machines Dance" dia noforonina tamina firafitry ny feon-kira tokana izay efa nanana firafitra gadona. Mazava ho azy, ireo singa efa vita novokarina efa vita vita toy izany dia mbola voavolavola be ihany, saingy teo no eo ny hevitra momba ny lapan'ny milina.
Ny zavatra hafa rehetra dia tena asa-tanana fotsiny. Raha manana traikefa be dia be ny mpamokatra dia saika vita ilay hira. Tsy izany no fahataperan'ny dia tamin'izany - mbola manaraka ihany ny injenieran'ny feo - fa vita haingana be ilay asa famoronana. Ireo izay afaka miasa toa an'io dia manana tombony lehibe rehefa mijery ny valiny tsikera, satria ny ankamaroany dia tsy mifototra amin'ny famoronan-tetesana, fa amin'ny fivoarana biolojika izay saika azonao jerena amin'ny fanaovana azy, ary tena tianay ity vokatra ity. Manantena izahay fa hitovy aminao izany.